Abakhiqizi be-MCCB & Abahlinzeki - China MCCB Accessory Factory
I-MCB Ngaphansi Kokukhishwa Kwe-Voltage
Ngaphansi kokukhishwa kwamandla
Amandla alinganisiwe angama-230V no-400V ngokulandelana. Ukukhishwa kuzophula i-breaker yesekethe lapho i-voltage yangempela iphakathi kwe-70% Ue-35% Ue; ukukhishwa kuzovimbela i-breaker circuit ekuvaleni lapho i-voltage yangempela ingaphansi kwama-35% Ue; ukukhishwa kuzovala ikhefu lesifunda lapho i-voltage yangempela iphakathi kwe-85% Ue-110% Ue.
Ukukhishwa Kwe-MCB Shunt
Kukalwe amandla ombane wokulawula (Us) wokukhishwa kwe-DAB7-FL shunt yi-AC50Hz ne-24V kuya ku-110V, 110V kuya ku-400V, DC 24V kuya ku-60V, 110V kuya ku-220V, lapho i-voltage yamanje esetshenziswayo isuka ku-70% Us iye ku-110% Us, i-shunt release izosebenza ngokuthembekile futhi yephule i-breaker circuit.
Ukuthintana kwe-Alamu ye-MCB
Oxhumana naye we-alamu osizayo
Inamaqembu amabili wokuxhumana wokudlulisa (njengoba kukhonjisiwe kumfanekiso ongezansi), lapho inkomba ephuzi iku- "", amaqembu womabili athintana nabo abasizayo, lapho inkomba ephuzi iku- "", kwesobunxele kungukuxhumana okusizayo, okulungile ukuxhumana kwe-alamu.